बिहानको जीवनशैलीबाट फेरिन सक्छ सिंगो दिन – Samatal Online
बिहानको जीवनशैलीबाट फेरिन सक्छ सिंगो दिन
बिहानी बिगारेर दिन खराब पार्ने कि बिहानैदेखि राम्रो दिन तय गर्ने, तपाइँकै हातमा छ।
– ड्रिउ हेन्ड्रिक्स
बिहान निद्रा खुल्नसाथ तपाइँ के गर्नुहुन्छ ? मोबाइलमा हात पुर्‍याउनुहुन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा आँखा डुलाउनुहुन्छ ? अर्थोक पनि गर्नुहुन्छ कि ?
ध्यान दिनुहोस् बिहानका शुरुआती पलहरु तपाईंको दिनकै सबभन्दा महत्वपूर्ण क्षण हुन् । यी पलले दिनभर सकारात्मक भावना विकास गर्न र तपाईंको दिन सार्थक बनाउन सक्छन् । तर, त्यसका लागि तपाईंले केही परिवर्तन भने अवश्य गर्नुपर्छ ।
यहाँ बिहानको समयलाई कसरी सुन्दर दिनका लागि तयार पार्ने भन्ने ६ तरिका प्रस्तुत गरिएको छ ।